Nhau dzeBhaibheri: Chipikirwa chaJefta - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Wakamboita chipikirwa here uye pashure ndokuwana kuti chakaoma kuchengeta? Murume ari mumufananidzo uyu akaita, uye ndokusaka akasuruvara kwazvo. Murumeyu mutongi akashinga anonzi Jefta.
Jefta anorarama apo vaIsraeri vasichirizve kunamata Jehovha. Vava kuitazve zviri zvakaipa. Nokudaro Jehovha anorega vaAmoni vachivakuvadza. Kunoita kuti vaIsraeri vadanidzire kuna Jehovha kuti: 'Takakutadzirai. Tapota, tiponesei!'
Vanhu vanozvidemba nokuda kwezvinhu zvakashata zvavakaita. Vanoratidzira kuti vanozvidemba nokunamatazve Jehovha. Nokudaro Jehovha anovabetserazve.
Jefta anosarudzwa navanhu kurwisana navaAmoni vakaipa. Jefta anoda zvikuru kuti Jehovha amubetsere muhondo. Nokudaro anopikira Jehovha kuti: 'Kana mukandipa rukundo pavaAmoni, munhu anotanga kubuda mumba yangu kuzosangana neni pandinodzoka kurukundo ndichakupai!'
Jehovha anoterera chipikirwa chaJefta, saka anomubetsera kuwana rukundo. Pakadzoka Jefta kumusha, unoziva here ari uyo anotanga kubuda kuzosangana naye? Mwanasikana wake, ari mwana wake mumwe bedzi. '0, mwanasikana wangu!' Jefta anochema. 'Rusuruvaro rwakadini rwaunondiunzira. Asi ndakapikira Jehovha, uye handingakudzori.'
Panonzwa mwanasikana waJefta nezvechipikirwa chake, pakutanga anosuruvarawo. Nokuti chinoreva kuti achatofanira kusiya baba vake neshamwari. Asi achapedzera humwe upenyu hwake mukubatira Jehovha patabernakeri yake muShiro. Nokudaro anoudza baba vake kuti: 'Kana makaita chipikirwa kuna Jehovha, munofanira kuchichengeta.'
Zvino mwanasikana waJefta anoenda Shiro, uye anopedzera humwe hwoupenyu hwake mukubatira Jehovha patabernakeri yake. Mazuva mana mugore riri rose vakadzi vokwaIsraeri vanondomushanyira ikoko, uye vanova nenguva inofadza pamwe chete. Vanhu vanoda mwanasikana waJefta nokuti mubatiri akanaka kwazvo waJehovha.
VaTongi 10 :6-18; 11 :1-40.
Jefta ndiani, uye akararama munguva ipi?
Jefta anopikira Jehovha chii?
Nei Jefta achisuruvara paanodzoka apedza kukunda vaAmoni?
Mwanasikana waJefta anotii paanoziva nezvemhiko yababa vake?
Nei vanhu vachida mwanasikana waJefta?
Verenga Vatongi 10: 6-18.
Inyeveroi yatinofanira kuteerera iri munhoroondo yokusatendeseka kwevaIsraeri kuna Jehovha? (Vat. 10:6, 15, 16; VaR. 15:4; Zvak. 2:10)
Verenga Vatongi 11:1-11, 29-40.
Tinoziva sei kuti kupa kwaJefta mwanasikana wake se“chipiriso chinopiswa” kwakanga kusingarevi kuti akamupisira sechibayiro chomunhu? (Vat. 11:31; Revh. 16:24; Dheut. 18:10, 12)
Jefta akapa mwanasikana wake sechibayiro munzirai?
Chii chatingadzidza pamafungiro aJefta pamhiko yake kuna Jehovha? (Vat. 11:35, 39; Mup. 5:4, 5; Mat. 16:24)
Mwanasikana waJefta muenzaniso wakanaka sei wevaKristu vechiduku mukuita basa renguva yakazara? (Vat. 11:36; Mat. 6:33; VaF. 3:8)